Hanqinni meeshaalee wal'aansa fayyaa Jigjigaatti rakkoo ta'e - BBC News Afaan Oromoo
Magaalaa Jigjigaa keessatti guyyoota muraasaaf rakkoon nageenyaa ture xiqqoo tasgabbaa'ullee haalli fayyaa namoota midhamanii badaa akka ta'e ibsame.
Kana kan jedhan Dhaabbata Fannoofi Addeessa Diimaa Naannoo Somaleetti ogeessa fayyaa waliigalaa Dr. Iyyoob Mokonninidha.
''Dhukkubsattonni as jiran baay'inaan balaa kanaan kan midhamanidha. Madaa isaaniif tajaajilli hin kennamne, sababa kanaan madaan baayyee isaanii kulkula ykn infection godhateera. Isaan kun qorichi hin laatamneefi madaanis hin miccamne. Nutis taajila keennutti jirra.''
Tajaajila to'aannoo atattamaa dhukubbii ykn Accute management of pain jedhamu dhibamtoonni osoo qabanii hin argatiin hafuu isaanifi amma garuu gartuun isaani amma danda'ametti tajaajila qoricha dhukkubbii dandamachiisu ykn pain killer hiraa akka jiran Dr Iyyoob ibsaniiru.
Dabalataanis namootni dhukuba shukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaaf yeroo dheeraaf yaalamaa turan sababa jeequmsa kanaatti akka qoricha isaanii argachuu hin dandeenyefi gargaarsa namoota dhuunfaa adda addaan ta'uufi amma dandeettii isaanitti garuu gargaaraa akka jiran dubbatu.
Guyyaa tokkotti namoota gara 100 ta'an yaalaniyyuu ammas baqattoonni Fannoo Diimaa jalattis ta'e dhabata biraa jalatti hin qabamiin jiran akka jiran dubbatu.
'Garbaasaa keessa kampiin jira. Achiitti hanga guyyaa kaleessaattii dhaabbata keenyaas ta'e kan bira jalatti baqattoonni hin qabamne 2000 ta'an jiru. Amma danda'ameetti gahaa yoo ta'uu baatullee qoricha qabnu irraa qoricha xiqqoo fudhannee isaan daawwanneerra. Yeroo kanatti rakkoo lafa bultiifi tajaajilli fayyaa jira. Sababiin isaa qaama nu gargaaru hin qabnu, kanaaf haalli mijaataan jira jechuuf nama rakkisa.''
Baqattoonni kunniin lafa bultii malee dirree irra akka jiraniifi looltonni buufata kana jiran amma danda'an sooruu yaalaniyyuu baqattoonni kun guyyaatti al tokko ol akka isaan nyaata hin arganne itti dabaluun Dr. Iyyoob dubbataniiru.